Voina · Aogositra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Aogositra, 2014
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Aogositra, 2014
Nampametra-panontaniana Mikasika Ny Fiarovana Ny Kianja Ny Fahafatesan'ilay Mpilalao Mpanafika Kameroney Albert Ebossé Tao Alzeria
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Aogositra 2014
Namoy ny ainy tamin'ny Asabotsy hariva teo ilay mpilalao mpanafika Kameroney Albert Ebossé, avy ao amin'ny ekipa JS Kabylie, rehefa voatoraky ny mpijery taorian'ny faharesen'ny ekipany tao amin'ny firenena
Andiam-Balala Hita Eto Antananarivo, Madagasikara
Afrika Mainty 28 Aogositra 2014
#valala pic.twitter.com/YHzOx5Q8QU — Vaintche Rahouli (@vincraholi) August 28, 2014 Namoaka sarin'andiam-balala manemitra an'Antananarivo renivohitr'i Madagasikara ny mpisera Twitter sy facebook maro avy eto Madagasikara. Tsy zava-tsy fahita eto Madagasikara ny fisian'andiam-balala, indrindra rehefa aorian'ny tadion'ny (rivodoza) andro mafana, fa tsy mahazatra kosa ny tanàna lehibe ny mahita izany. Mety handravarava...
Bolgaria 28 Aogositra 2014
Azia Atsimo 24 Aogositra 2014
Ny tanjon'ny rodobe ho an'ny famantarana ny toetrandro ao Bangladesh dia ny fandalinana ny toetrandro ratsy any, anisan'izany ny tondradrano, ny rivomahery ary ny haintany.
Ahoana Ny Handraisan'ny Tanora Anjara Amin'ny Fampihenana Ny Voina
Afrika Mainty 12 Aogositra 2014
Fitaovana sarobidy hampiasaina amin'ny famantarana sy firosorahana ny loza voajanary ny tanora.
Azia Atsimo 08 Aogositra 2014
Serbia 08 Aogositra 2014
Niharan'ny tondra-drano mahery indray i Serbia nandritra ny andro faraparan'ny volana jolay. Jereo ireo saripikan'ny fahapotehana voaangona avy amin'ny mpiseraseran'ny media sosialy.
Kamerona 06 Aogositra 2014
Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny radiotelevisiona Kameroney (CRTV), niresaka momba ny fanafihana tao Kolofata ihany ny filohan'i Kamerona Paul Biya, ary nihantsy ny vondrona Islamista Nizeriana Boko Haram.